Nhandare | RayHaber | raillynews
Turkey, yendege nhau, Airport makondirakiti uye zvokuvakisa Results
Mahara Stroller Service Yakatangwa kuIstanbul Airport
Hüseyin Keskin, General Directorate of State Airports Authority (DHMİ) uye Sachigaro weBhodi, vakazivisa kuti basa remahara rekuti 0-6 zera rekutanga rave kutanga paIstanbul Airport. Nezve iyo nyaya, maneja weKeskin [More ...]
Panhandare nendege nhatu dzeIstanbul, nyanzvi dzakaongorora kuchengetedzeka kwendege: "Sabiha Gökçen ndiyo yechipiri nzira." [More ...]
Sabiha Gökçen Airport Runway ichavhurwa riini?
Nzvimbo yechipiri yekumhanya, yakatanga kuvakwa muSabiha Gökçen Airport muna 2015, yakarongerwa kuiswa mukupera kwa2020. Zviuru zvitatu nemazana mashanu zvakavakwa zvakafanana nechitima chiripo paSabiha Gökçen International Airport, airport kuIstanbul [More ...]
Imamoglu Vakatarisa Vakakuvadzwa MuPlan Crash
IMM Sachigaro Ekrem İmamoğlu vagari vakuvara mutsaona yendege aizunungusa Turkey, vakashanyira chipatara uye kurapwa Kartal Pendik. Vachitaura nevanga vakuvara, İmamoğlu akati, "Porai nekukurumidza" kune vakawirwa nehama nehama. [More ...]
Sabiha Gökçen Airport is Out of Runway! 3 Vafa 180 Vakakuvadzwa
Zvaitaurwa kuti ndege ndeyaPegasus Airlines, iyo yakaita Izmir-Istanbul kudzingwa kuyedza kugara paSabiha Gökçen Airport, yakasiya runway. Kwakataurwa kuti nhandare yendege yakavharwa kwenguva pfupi ndege kuti tsaona mushure me tsaona. Gurukota rezvehutano, Fahrettin Koca, vanhu zana nemakumi masere [More ...]
Vanamuzvinabhizinesi Vemagariro Vanosangana kuIstanbul Airport
Kupfuura kuva nendege, Istanbul Airport, iyo yakarongedzwa senzvimbo yekugara munharaunda, inovhura masuo ayo kune vemabhizinesi vezvemagariro mukati meiyo nzvimbo ye "IGA Social Hackathon" (Social Hack). Vanamuzvinabhizinesi vezvemagariro, vanogadzira graphic, vari pakati pe 20-22 Kurume 2020 [More ...]
Antalya Airport Extension Tender ichaitwa riini?
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu uye nezvekuumbwa kwezvinhu, Cahit Turhan akati, "Takamirira nzvimbo yakanaka kwazvo pamusika weAntalya Airport." Akataura kuti nzira iripo kuSabiha Gökçen Airport inotarisirwa kuvhurwa mukupera kwegore. [More ...]
Istanbul Airport Inoshandira Mamirioni 55 Vaperekedzi
Minister Turhan vakataura kuti mari yakagadzirwa neiyo Ministry yakakosha kwazvo nyika kumusangano wevatori venhau wakarongwa neRuzivo Technologies uye Communication Institution (BTK) zvine chekuita ne2019 uye ongororo ye2020. Turhan, [More ...]
Rize Artvin Airport ichavhurwa riini?
Turhan, uyo akaita bvunzo mukuvaka kweRize-Artvin Airport, akataura kuti vaive nemukana wekuona zvirongwa zviripo muguta nekushanya kwavo mukati mezuva. Kupa ruzivo nezve basa pane iyidere-İkizdere mugwagwa mukuru, [More ...]
Gaziantep Airport Haingabatirwe Kune Fog Barrier
State Airports Authority (DHMİ) yakagadziridza iyo iripo Instrument Landing System (ILS) paGaziantep Airport kuenda kuCAT 2. Nenzira iyi, hakuzove nekubviswa kwekubhururuka mumamiriro ekunze ekunze kwemamiriro ekunze apo kuoneka kunodzikiswa, uye unokwanisa kugona pasi zvakanyanya. [More ...]
Istanbul Airport Yakapfuura Yayo Vatakuri Chinangwa mune Rayo Rokutanga Basa Rekutanga
Turkey kuti suo kuti nyika musi April 6, 2019 somusi zvizere okuita kushanda kwacho, iyo yakatanga muna Istanbul Airport, uko inosimbiswa kambani mugore mamiriyoni 233,1 euros DHM International Terminal Vafambi okutanga [More ...]